Ukunakekelwa Kwe-Franchise - Amathuba Wokunakekelwa Kwe-Franchise | I-Franchiseek
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Nakekela Franchise
Okufakiwe Kwokunakekelwa Kwama-Franchise
Izinketho zeMeshi zinikeza abasebenzi abanakekelayo ukunakekela amakhaya, ama-NHS, izinkampani zezokunakekelwa kwempilo kanye nezinsizakalo zokunakekelwa kwasekhaya. Nathi unga…
I-Circle Funerals Partner Partner Franchise Full Circle Funerals inikezela ngenkonzo yomngcwabo egxile kumuntu, ekhombisa umuntu uqobo ukuthi…
Izinsiza Zokunakekelwa Kwamuva
Izinketho zomdlalo Franchise
Izinketho zeMeshi zinikeza abasebenzi abanakekelayo ukunakekela amakhaya, ama-NHS, izinkampani zezokunakekelwa kwempilo kanye nezinsizakalo zokunakekelwa kwasekhaya. Nathi unga ...
I-Full Circle Funerals Franchise
Full Circle Imingcwabo Partners Franchise Full Circle Imingcwabo ukunikeza inkulumo yomngcwabo umuntu-igxile ngokuphelele, ukuthi ngayo ngempela umuntu ukuthi ...
Ikhaya Esikhundleni Kunakekela Abadala
Ikhaya Kunalokho Ukunakekelwa Kwabadala - i-UK's No.1 Franchise Home UK esikhundleni Sokunakekelwa Okuphezulu yinkampani yaseFranchise yase-UK.
IHarmony ekhaya iyiFranchise ewina imiklomelo eminingi ifuna osomabhizinisi abanakekelayo bathathe i-nanny uNdunankulu kanye nabasebenzi abasebenza ezindlini ....
Inani labantu asebekhulile landa ngokushesha manje ngenxa yesimangaliso sokunakekelwa kwempilo kwanamuhla. Kepha amathemba okuphila esanda emhlabeni jikelele lokhu kusho ukuthi abantu abaningi bazodinga izinsizakalo zokunakekela ukunakekela lapho ukhula. Kungakho imboni yokunakekela ibilokhu ikhula ngokushesha emhlabeni wonke iminyaka eminingi manje. Ngakho-ke uma ubheke ukutshala imali enkulumweni yokunakekelwa kokunakekelwa ngethemba lolu hlobo lwemininingwane luzokusiza ukuthi uthole ukuqonda embonini yokunakekelwa okusheshayo.
Izibalo zomkhakha wokunakekela.
Manje sizoklelisa ezinye izibalo ezingezansi eziqoqwe eminyakeni edlule ezizungeze imboni yezokunakekela ukukhombisa ukukhula kanye nesisekelo samakhasimende sokufinyeleleka lapho utshala imali kula mathuba athengiswayo.
Ukunakekelwa kwezempilo emhlabeni jikelele kulindele ukubona ukwenyuka okungu-5% okubikezelwe ngonyaka ka-2023.
Umkhakha wezokunakekelwa kwempilo ubiza amadola angama- $ 11 trillion emhlabeni jikelele.
Ngokukhula kwesikhathi sokuphila okulindelekile kulindeleke ukuthi siphinde sikhuphuke e-UK siye kuma-90 ngonyaka ka-2030.
Ngabe lezi zibalo zibonisa ini embonini yokunakekelwa komhlaba wonke
Lezi zibalo zibonisa ukuthi isikhathi sokuphila sanda kanjani ngokushesha. Okusho ukuthi minyaka yonke eyishumi noma abantu bazolindelwa ukuba baphile isikhathi eside okuzoletha inani elikhulu labantu abacela ukunakekelwa ekhaya noma uhlobo oluthile lwezinsizakalo zokunakekelwa. Ngakho-ke konke lokhu kukhombisa ukuthi ukwanda kusakhula ngokushesha futhi kuzoqhubeka kuyo yonke iminyaka ezayo. Futhi lo mkhakha wonke ubiza ama- $ 11 trillion dollars ngakho okukhombisa ukuthi kulezi zinsuku kunemali enkulu engenziwa emkhakheni wezokunakekelwa.
Isiphetho esizungeze umkhakha wezokunakekelwa emhlabeni jikelele.
Sekukonke ukufunwa komkhakha wokunakekela izingane kuzoqhubeka kukhula iminyaka neminyaka ezayo nokwanda kwesayensi yanamuhla nokunakekelwa kwezempilo kuya kuba ngcono ngosuku esizoqala ngalo ukubona ukwanda kwesikhathi sokuphila sifinyelela emazingeni esingakaze sawabona ngaphambili. Futhi uma ucabanga ukuthi imboni yokunakekela akuyona inkomishi yakho yetiye noma ufuna ukuphishekela enye imboni kungani ungabhekabheki umkhombandlela we-Franchise wezimali zomhlaba wonke emhlabeni jikelele.
Umgomo we-Gourmet Hog Roasts 'wokuba ngumlandeli we-hog ongcono kakhulu nowekati ongaphandle. Ukugxila kwikhasimende elihlukile…
Ukusiza abanikazi bezimali ukwenza izimangalo zomshuwalense wokulimaza impahla esiyimpumelelo Siyinkampani ewina umklomelo esisiza abanikazi bezinqubomgomo ukuba benze ukulimala kwempahla okuphumelelayo…